Tuesday . 26 May . 2020
အမေရိကန်၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ကာရိုတန်မြို့အခြေစိုက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးဖို့အရေး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ကောင်မလေးဟာ တခြားသူတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်အောင် တမင်ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုပြီး ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွ ဝန်ခံခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ နာမည်ကျော်လိုဇောနဲ့ ပြုလုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ကောင်းပေမယ့်၊ ဥပဒေအရ ခွင့်လွှတ်လို့ မရပါဘူး။
ကောင်မလေးရဲ့အမည်ကတော့ Lorraine Maradiaga ဖြစ်ပြီး၊ အသက်(၁၈)နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ တခြားလူတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ မကူးကူးအောင် စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။
Lorraine ဟာ တကယ်ပဲ ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်အောင် လိုက်ပြီးဖြန့်ဝေခဲ့သလား၊ ဒါမှမဟုတ် နာမည်ကြီးလိုဇောနဲ့ မပြောသင့်တာကိုပြောပြီး အတန်းရှင်းယူတာလားဆိုတာကတော့ သူမကို သေချာစစ်မှသာ သိနိုင်မှာပါ။
လောလောဆယ်တော့ Lorraine ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး ရဲက ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရပါတယ်။ Lorraine ဟာ ဗွီဒီယိုကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက် Snapchat ပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာပါ။ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ သိန်းဂဏန်းလောက် ရှိသွားခဲ့ပြီး၊ အများအားဖြင့်တော့ ဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။ ပထမဗွီဒီယိုကတော့ Lorraine ဟာ ဆေးရုံမှာ ဆေးစစ်ချက်ခံယူနေပုံရှိပြီး၊ သူနာပြုဆရာမက Lorraine ကို အိမ်ပြန်ဖို့ ပြောနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒုတိယဗွီဒီယိုမှာတော့ Lorraine ဟာ Walmart စတိုးတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေပြီး ဗွီဒီယိုထဲမှာ သူမက ” ကျွန်မ အခု Walmart ကို ရောက်နေပါပြီ … အကြောင်းကတော့ မအေ @#$ တွေကို ကူးစက်အောင် လုပ်ဖို့ပါ … ကျွန်မသာ အသက်မရှင်ရဘူးဆိုရင် … မအေ @#$ တွေကိုလည်း အသက်ရှင်ခွင့် မပေးပါဘူး “ဆိုပြီး အတည်သဘောနဲ့ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သူမက ကင်မရာကို တည့်တည့်ကြည့်ကာ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးပြပြီး ” တကယ်လို့ ရှင်တို့အနေနဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံပြီး ခွေးသေဝက်သေ သေချင်တယ်ဆိုရင် … ကျွန်မကိုသာ လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ … ကျွန်မ လာတွေ့ပါမယ် (ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးရင်း) … ရှင်တို့ အသက်ကို တိုအောင်လုပ်ပေးမယ် “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရဲကတော့ သူမကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပုဒ်မနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ Lorraine မှာ ကိုဗစ်ရှိမရှိကို မသိရသေးပါဘူး။
ကိုဗစ်၁၉ တုံ့ပြန်ရေးကူညီရန် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ ထည့်ဝင်မည်ဟု တရုတ်သမ္မတ ကတိပေး
မွေးမွေးချင်း မိခင်အရင်းက စွန့်ပစ်သွားပေမယ့် ကံကောင်းစွာကယ်သူပေါ်လာခဲ့တဲ့ သမီးလေး